प्रधानमन्त्रीलाई एक राप्रपा नेताको पत्र
१८ फागुन, काठमाडौँ । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् ।
पत्रमा उनले संसदभित्र गणितीय खेल सुरु भएको, त्यसले संविधानलाई नै असफल बनाउने स्थिति देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले प्रजातन्त्र बचाउन र मुलुकलाइ प्रजातान्त्रिक माध्यमवाट विकासको युगमा लान ‘संवैधानिक राजतन्त्र’को स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् ।
संविधानको परिधिभित्र रहनेगरि निष्पक्ष संस्थाको रुपमा राजसंस्थालाइ स्थापना गर्न सकियो भने यसले प्रजातन्त्रलाइ मजवुद बनाउनेमा उनले जोड दिएका छन् ।
पत्रमै उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बिना सोचविचार निर्णय गरिदिने राष्ट्रप्रतिको भूमिकाप्रति पनि उनले गम्भिर असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘संविधानको संरक्षक र पालकको रुपमा रहेको राष्ट्रप्रमुखको पद र भुमिका निष्पक्ष भएको भए सायद यो दिन आउँदैन थियो होला।’
प्रधानमन्त्री ज्यू सादर नमस्कार।
तपाईं भन्दा राजनीतिमा फरकमत राख्ने एक दलको कार्यकर्ता को हैसियतले केहि लेखेको छु।
लामो वहस, छलफल, पक्ष, विपक्षका तर्क जनताको मत समेत सवैको प्रस्तुति पछि संविधानको व्याख्या गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएको छ। यसवाट मुलुकमा संविधानवाद लागु भएको छ। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त स्थापित भएको छ।
यसले संविधान भन्दामाथि कोहि नरहने र भविष्यमा कसैले आफुलाइ संविधान भन्दामाथि देखाउने धृष्टता गरेमा नियन्त्रित हुने नजिर वसालिदिएको छ। यो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाइ राप्रपाले स्वागत गरेको छ, समर्थन गरेको छ। संविधान भित्रका व्यवस्थालाइ स्वागत गर्नु पनि पर्छ। यहा प्रस्न व्यक्तिसंग भन्दा नि सिद्धान्तसंगको हो, संविधानवाद संगको हो।
प्रजातन्त्रको सुन्दरता नै कानुनि राज्य हो। व्यक्तिगत रुपमा कसैको मिठो वोलि र सम्वन्ध भन्दा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाइ परिभाषित गर्दै आजको दिनमा अगाडि वढनु पर्ने वास्तविकता हो। नेपाली राजनीतिका आउने दिनहरु अझै अन्योलपुर्ण देखिन्छ। आफ्ना आधारभूत निति असफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले स्वत राजिनामा दिनु पर्ने हो तर संसदमा पेस हुने र त्यहीँबाट हुने निर्णय मान्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाइ सम्मान गर्नै पर्छ।
अव संसदभित्र गणितका खेलहरु सुरु हुन्छन। हुनत संसद गणित ले नै चल्छ तर संसद भित्र गणितका लागि घृणित खेलहरु हुनथाल्यो भने अनि गणितले सहि रुप लिन सकेन भने संविधान असफल हुने पक्का छ त्यसवारे खेलका प्रमुख खेलाडीहरुले वेलैमा सोच्नु पर्छ।
प्रमुख खेलाडीले अन्य खेलाडीलाइ पछार्न खोज्दा आफुपनि पछारिने अवस्थालाइ समेत ध्यान दिनु जरुरी छ।एक शक्तिले अर्को शक्तिलाइ निषेध भन्दा पनि सवैको आजको आवश्यकता हो।
भन्ने गरिएको ठूलो क्रान्ति र परिवर्तन पछि आएको संविधान किन यति चाडै असफलता तिर जादैछ ? यस्तो भडखालो किन आयो ? यो गम्भीर प्रस्न हो।अवको राजनीतिक वहस यहि विन्दुवाट सुरु गर्नु पर्छ। संविधानको संरक्षक र पालकको रुपमा रहेको राष्ट्रप्रमुखको पद र भुमिका निष्पक्ष भएको भए सायद यो दिन आउँदैन थियो होला।
हाम्रो माहामहिम राष्ट्रप्रमुखले पुराना नजिरहरुको अध्ययन वा तत्काल श्रृजित घटनाहरुको विषयमा पदको गरिमा राख्दै गहिरो अनुसन्धान गरि निर्णय गरिदिएको भए आज राजनीति अन्योलग्रस्त हुदैन थियो।
कल्पना गरिएको निष्पक्ष संस्था आज दल, दलभन्दा नि गुट, गुटको नि उपगुटको नियन्त्रणमा रहेको छ। अझ भन्दा कार्यकारीको एक इकाइ सरह हुन पुगेको छ।
आँखा चिम्लिएर महोदयले अनुमोदन गरिदिएको विषय र त्यसलाई गलत ठहर गरि आएको आदेशले उहाको न‌ैतिक धरातल माथि प्रस्न उठेको छ। पटक,पटक विवादमा आइरहने उहाको निर्णयले प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भमाथि प्रहार गरेको छ। प्रजातन्त्रको जग कमजोर वनाएको छ।
यस परिवेशमा राप्रपाले राष्ट्रप्रमुखमा राजसंस्था रहनुपर्छ भनि गर्दै आएको वकालत थप सान्दर्भिक देखिएको छ। संविधानको परिधिभित्र रहनेगरि निष्पक्ष संस्थाको रुपमा राजसंस्थालाइ स्थापना गर्न सकियो भने यसले प्रजातन्त्रलाइ मजवुद बनाउछ। हिमाल, पाहाड, तराइ, सवै भेगका नागरिकले सम्मान गर्ने संस्थाको रुपमा राजसंस्था स्थापना गरेर प्रजातन्त्रलाइ थप सुदृढ वनाउने राप्रपाको मुल विषयमा ध्यान दिउ प्रधानमन्त्री ज्यु,
सवै राजनीतिक दल मिलेर अव यो विषयमा छलफल सुरु गरौ।
मुलुक निर्माणमा अतुलनिय योगदान गरेको राजसंस्थालाइ हिजो हामिले विदेशीको इसारामा होस वा कसैको कुण्ठाको कारण हटाएर गम्भीर गल्ती गरेका छौ। आज इतिहासले त्यो गल्ती स्विकार्ने र सुधार्ने अवसर सवै राजनीतिक दलहरुलाइ दिएको छ।
सवैले मान्ने गरेको आदर्सपुरुष प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उचाइ प्रप्त गरेका स्व. विपी कोइरालालाइ मनैदेखि सम्झने दिन आएको छ। व्यक्तिगत रुपमा आफुले राजसंस्थाको कारण दुख पाए पनि वृहत नेपाली राष्ट्रिय हितको निमित्त किन उनले जिवनभर राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गरे आजको पिढिले त्यो विर्सन हुन्न। इतिहास सधै भविष्यको मार्गदर्सन भएर रहन्छ।
यो सत्यलाइ आत्मसात गर्दै प्रजातन्त्र बचाउन र मुलुकलाइ प्रजातान्त्रिक माध्यमवाट विकासको युगमा लान सवैले पुराना रिस, राग, कुन्ठा त्यागेर राष्ट्रप्रमुखमा राजसंस्था रहने गरि वृहत सहमति कायम गराउन छलफलको सुरु गरौ प्रधानमन्त्री ज्यु।
मुलुक को ठोस आवस्यकताको ठोस विष्लेषण गरि प्रजातन्त्रलाइ थप वलियो र मजबद वनाउदै अगाडि वढनुपर्ने गम्भीर दायित्व यतिवेला क्रियासिल राजनीतिक दलहरुको काधमा आएको छ यस परिवेशमा लडाइको मोर्चा आफैले सम्हाल्द‌ै परिवारका धेरै सदस्यहरु गुमाउदा समेत हरेस नखाइ मुलुक निर्माणमा योगदान पुरायका,प्रजातन्त्र स्थापनार्थ गद्दी दाउमा लगाएका, विदेशीहरु सामु कहिले लम्पसार नपरेका, मुलुकलाइ पटक, पटक उपनिवेश हुनवाट जोगाएका, गद्दी त्याग गर्दा समेत पत्रकार सम्मेलन गरेर पाखा लाग्न सक्ने क्षमता प्रस्तुत गरेको शक्तिलाइ पुनःस्थापना गरेर प्रजातन्त्रलाइ थप वलियो वनाउद‌ै वृहत राष्ट्रिय हितमा अगाडि वढनको निमित्त सवैदलहरुमा चेतना आवस।
बुटवलको लुम्बिनी अस्पताल । ९७ वर्षीय हजुरवुवाको उपचारका लागि आएका…
दयाकी खानी, कोमलताकी खानी रानी, सृष्टिकर्ता, लक्ष्मी, सरस्वती देवीको अर्को…
‘केपी ओलीज्यू तपाईको पार्टीको नाम नेपाल कमेडी पार्टी (नेकपा) राख्नुहोस्’
महामहिम राष्ट्रपतिज्यू शितल निवासमा कसरी आरामले बस्दै हुनुहून्छ ?
जनकपुर जयनगर रेललाई तुरून्त निजीकरण गर्नुपर्छ